2022 Fashion Trends and Tips - ၂၀၂၂ တွင်ခေတ်စားလာမယ့် ဖက်ရှင်များ
2022 Fashion Trends and Tips – ၂၀၂၂ တွင်ခေတ်စားလာမယ့် ဖက်ရှင်များ2147
၂၀၂၂ ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းတွင် စီး‌‌မြောပြီး ခေတ်စားလာမယ့် ‌Trends ၉ ခုနဲ့ Tips တချို့ကို Shop App MM ရဲ့ ဒီတစ်ပတ် ဖက်ရှင်ကဏ္ဍ မှ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
“Personal Image” အကြောင်းမျှ‌ဝေပေးသွားတဲ့ အရင်တစ်ပတ်ရဲ့ Article များကို ဒီမှာ ဖတ်ရှုပါ။
၁. စျေးသင့်တင့်တဲ့ Skincare များနဲ့ အ‌ခြေခံထိန်းသိမ်းနည်းများ (MM)
၂. နှစ်သစ် Fashion Resolution (ENG)
*** ကြားဖြတ်အထူးသတင်းကောင်း ***
Shop App တွင် ၂၀၂၂ ဇန်နဝါရီလ ၂၄ မှ ၃၀ ရက်နေ့အထိ “FASHION WEEK” ဖက်ရှင်စျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးကို ဒီလင့်ခ်တွင် ကျင်းပလျက်ရှိပြီး အမိုက်စားဖက်ရှင်များ အတန်ဆုံးလျှော့စျေးများဖြင့်ရောင်းချပေးနေပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ရပါတယ်။
ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းများတွင်‌ ပိုမိုခေတ်စားလာတဲ့ Denim ဒီဇိုင်းများကို မိုးပြာရောင်၊ အဖြူရောင်များနဲ့တွဲစပ်ခြင်းက တည်ငြိမ်ပြီးအထာကျတဲ့ Look တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါပုံရှိ “NOBODY JEANS” ဒီဇိုင်းများကို Shop App ရှိ Official Store တွင် ဒီနေရာကိုနှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ‌ခေတ်စားလာတဲ့ ဖက်ရှင်တစ်မျိုးကတော့ Show-Off design တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
မိမိရဲ့ ကျန်းမာကျစ်လစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဖက်ရှင်ဆင်ယင်မှုတွင် အသုံးချခြင်းကလည်း မိမိရဲ့ ယုံကြည်မှုကို တိုးမြှင့်‌ပေးရုံသာမက ဒီဇိုင်းဆင်ယင်မှုများစွာကိုလည်း ဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါပုံရှိ “RENÉ Mattias” ဒီဇိုင်းများကို Shop App ရှိ Official Store တွင် ဒီနေရာကိုနှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
၁၉၅၀ နှစ်တွင် ခေတ်စားခဲ့တဲ့ Black & White ပိုကာဒေါ့ဖက်ရှင်တွေကလည်း (2021 Cruella) ထွက်ပြီးနောက်ပိုင်း ပြန်လည်ခေတ်စားခဲ့တဲ့ဖက်ရှင်ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၂ ရဲ့ ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။
Shirt, Tee, Sweater .. ဘယ်လို အင်္ကျီမျိုးမဆို တွဲဖက်လျှင် ဖက်ရှင်ကျပြီးလွတ်လပ်တဲ့ Pleated Skirt တွေဟာလည်း ၂၀၂၂ ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းတွေထဲကတစ်ခုပါ။
ခုနောက်ပိုင်းများတွင် Informal အနေနဲ့သာမက Formal wear အနေဖြင့်ပါ ဝတ်ဆင်လာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
သင်ဟာ ဗြောင်ဒီဇိုင်းတွေကို ပိုမိုရွေးချယ်သူတစ်ယောက်ဆိုရင် ၂၀၂၂ မှာ ခေတ်စားလာမယ့် Graphic Tee ကဲ့သို့သော Sticker ဒီဇိုင်းများလည်း ရွေးချယ်ပြီး ခေတ်ရေစီးကြောင်းနဲ့အတူ စီး‌မြောဖို့အသင့်ပြင်ထားလိုက်ရအောင်။
အောက်ဖော်ပြပါပုံရှိ “MIX” ဒီဇိုင်းများကို Shop App ရှိ Official Store တွင် ဒီနေရာကိုနှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဖက်ရှင်ဆိုတာ တစ်ခေတ်ပြန်လည်တယ်ဆိုသလို Baggy Pants / Oversized-Clothing တွေက လွတ်လပ်မှုကိုအပြည့်အဝပေးရုံသာမက ၂၀၂၂ မှာ ခေတ်စားလာမယ့် ဒီဇိုင်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါပုံရှိ “Bossini” ဒီဇိုင်းများကို Shop App ရှိ Official Store တွင် ဒီနေရာကိုနှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Horizontal Stripe & Tips
အလျားအစင်းများပါတဲ့ဝတ်စုံတွေကိုရွေးချယ်ခြင်းက ကြည့်ရှုသူအပေါ် ပိုမိုသွယ်လျပြီး အရပ်ရှည်စေတဲ့အမြင်ကို ပေးစွမ်းနိုင်တာကြောင့် ပြည့်ဖြိုးပြီး အရပ်မရှည်သူများအနေဖြင့် ၂၀၂၂ မှာ ပိုမိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
Vertical Stripe & Tips
ဒေါင်လိုက်အစင်းများပါတဲ့ဝတ်စုံတွေကိုရွေးချယ်ခြင်းက ကြည့်ရှုသူအပေါ် ပိုမိုပြည့်ဖြိုးပြီး အရပ်မရှည်စေတဲ့အမြင်ကို ပေးစွမ်းနိုင်တာကြောင့် သွယ်လျပြီး အရပ်မရှည်လိုသူများအနေဖြင့် ၂၀၂၂ မှာ ပိုမိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
ဖက်ရှင်မှာ စည်းမျဉ်းမရှိပါ။ Streetwear တွေကဲ့သို့သော ဖက်ရှင်စည်းမျဉ်းတွေသိပ်မပါတဲ့ ဒီဇိုင်းများကို ၂၀၂၂ မိမိစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်ဖို့ အကြုံပြုပါရစေ။
အောက်ဖော်ပြပါပုံရှိ “My Boo” ဒီဇိုင်းများကို Shop App ရှိ Official Store တွင် ဒီနေရာကိုနှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
*** အထူးသတင်းကောင်း ***
Previous ArticleNew Year, New Fashion Resolution 2022Next ArticleLet’s Explore Mega Campaigns’ 10 Popular Features of Shop MM
thank you … it’s very useful